ဟိုဘဏ်မှာ Deposit တင်ထားတဲ့အတွက် ဗဟိုဘဏ်က ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအတွက် အာမခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေငွေကြေး အကျပ်အတည်းဖြစ်လာပြီး Interbank market ကတစ်ဆင့်ငွေချေးလို.မရတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဗဟိုဘဏ်က Lender of last resort အနေနဲ. ၄င်းတို.ပြိုလဲမသွားအောင် ငွေထုတ် ချေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကြုံပြီး ဘဏ်ပျက်တဲ့အဖြစ်မျိုး ဖြစ်စရာမရှိနိုင်ပါဘူး။
This entry was posted in Uncategorized on August 26, 2015 by koshwehtoo.
← ဘယ်ပါတီကိုကြည့်မလဲ News in Brief →